Mechanics: Njalo umdlali ubeka ubuncane ukubheja isamba £ 10 (noma ezinye okulingana nemali) across Aloha! Cluster Pays™ he/she will receive 1* ithikithi ukungena draw umklomelo. * Isidlali esifanayo ungathola esiphezulu 50 amathikithi umklomelo draw ngelanga.
Ukuphumelela Game: Aloha! Cluster Pays™.
Abaphumelele izokhetheka kusukela ngaphesheya inethiwekhi ngokusebenzisa okungahleliwe umklomelo draw.
Umncintiswano umklomelo kuyothathwa kwenziwe kanye. Uma umdlali ngokuwina ayixhumaneki ngempumelelo (nakuba ejensi noma imizamo ka-opharetha), the prize awarded may be declared void at NetEnt’s discretion, kulandela lapho umklomelo ngeke zabelwe imuphi omunye obambe iqhaza. Lokhu kuyakuba ziyasebenza draw umklomelo kufanele kube uyize ngokusebenzisa ukunganaki opharetha ezifana ngokuvumela abadlali kusukela ezindaweni kuvinjelwe ukubamba iqhaza noma abadlali avela ku-opharetha ngokukhetha non-ukhethile brand of opharetha(s) afakiwe draw.
The cash prizes are worth £8500 and will be shared amongst 500 ngokuwina abadlali.
Yiziphi izindleko ezihlobene intela kuyakuba umthwalo womdlali.
Ngamunye opharetha ngokuwina umdlali / s ukwazisa umdlali futhi ukhokhe umklomelo imali ku-akhawunti umdlali.
imiklomelo Cash asikwazi ukuba YILUPHI izidingo babheja engosini. Abadlali kumele akwazi ukuhoxisa imiklomelo ngokushesha kufanele bona ufisa ukwenza kanjalo.
Ukuze abale nezidingo babheja engosini uma non-EUR lwemali, NetEnt izosebenzisa ukubheja okungenani imidlalo labafanelekako kungakhathaliseki lwemali kanye ukuguqulwa rate phakathi kobusuku ekupheleni kosuku lokuqala Promo, nge enjalo lokuguqulwa kokuba kunqunywa BI idatha ishede.
NetEnt will refund the cash prizes according to the EUR values mentioned above, kodwa iguqulwe (usebenzisa izilinganiso nyangazonke isilinganiso) ibe uhlobo lwemali lamarisidi ngokuvamile esetshenziselwa.
Imigomo nemibandela ingasebenza Imali umenzi